Ihe ngosi - AEON Harvest Industry (Hunan) Co., Ltd.
AEON owuwe ihe ubi bụ onye na -ekesa ahịa ahịa ụwa zuru ụwa ọnụ nke enyere ikike yana nke HUAHENG Automation. Anyị nwere ndị otu ndị na-ere ahịa tupu ịza ajụjụ ndị ahịa wee kwado nkọwa teknụzụ, na-ahụ na nhọrọ ịzụ ahịa ọ bụla kwesịrị ekwesị ka mmejọ ọ bụla ghara ime. Nke kachasị mkpa, ndị otu ọrụ azụmaahịa nwere ahụmịhe nwere ihe karịrị ndị injinia iri na-eche 24-hour iji nyere ndị ahịa aka idozi nsogbu ngwa ngwa. Ebumnuche anyị bụ ịnye ndị enyi anyị na ndị mmekọ ụwa niile ọrụ dị elu na ngwaahịa a pụrụ ịtụkwasị obi.
Anyị na -echepụta, rụpụta na ire ụdị ngwa ịgbado ọkụ, ngwa ịcha igwe na ngwa nkwakọba ihe AS/RS na ngwaọrụ inyeaka.
Machine Igwe ịgbado ọkụ Orbital;
Akụrụngwa ịgbado ọkụ akpaka;
Tools Ngwa nkwadebe ọkpọ;
Plasma/Laser Cutting Machine;
Ngwa AS/RS akụrụngwa na ngwanrọ;
Tọrọ ntọala na 1995, HUAHENG Automation bụ ụlọ ọrụ teknụzụ dị elu nke malitere ịrara onwe ya nye igwe ịgbado ọkụ orbital, sistemụ ịkpụ CNC, nyocha ngwa ụlọ nkwakọba ihe AR/RS, mmepe, imepụta na China. N'ịchọ ịbụ akụrụngwa akụrụngwa ịgbado ọkụ gburugburu ụwa zuru oke na onye na -eweta ihe ngwọta, HUAHENG na -agbasi mbọ ike imezu ọtụtụ ọganihu teknụzụ, ugbu a nwere ndị ọrụ 800, ma nwekwa ikike ikike ikike ọgụgụ isi nweere onwe ya nke 200.
Ọrụ: Isi okwu
Dị ka onye dị umeala n'obi so na nnukwu ụlọ ọrụ na -emepụta mba ofesi, anyị na -edebe okwu a "Ọrụ" n'ime obi anyị. Echiche nke ibu ọrụ anyị na -ekwu maka ya gụnyere ọ bụghị naanị ọrụ ụlọ ọrụ ahụ nye ndị ahịa, kamakwa ọrụ dịịrị ụlọ ọrụ maka ndị ọrụ, yana n'ezie ibu ọrụ nke onye ọrụ ọ bụla n'onwe ya. Ọrụ kacha dịrị ndị ahịa bụ inye ndị ahịa ngwaahịa dị nchebe, ntụkwasị obi na nke dị elu, anyị na-asọpụrụkwa ikike ndị ahịa ịmara na nhọrọ efu, ka o kwere mee ka ndị ahịa ghọta ngwaahịa anyị n'akụkụ niile, wee nweere onwe ha họrọ ngwaahịa.
Ozi anyị: Ịmepụta uru maka ndị ahịa
Nọgidesie ike n'echiche na-emeghe ma na-arụkọ ọrụ ọnụ, mepụta uru maka ndị ahịa nwere ndị mmekọ ụlọ ọrụ, nyere ndị ahịa aka ịghọta mgbanwe dijitalụ na ọgụgụ isi nke nrụpụta, kwalite mmepe na-adigide nke ụlọ ọrụ na-emepụta ọgụgụ isi, ma na-emekọ ihe ọnụ na ndị ahịa maka ọnọdụ mmeri.